कलालयको नाटकलाई कलकत्ताको निम्तो, अध्यक्ष सोनु जयन्ती भन्छनः गर्वको कुरा हो
आगामी भदौ १६ गते इटहरीको नाट्य संस्था कलालयको औपचारिक स्थापनाको ठिक १२ वर्ष प्रवेश हुन्छ । १२ वर्षको अवधिमा कलालय इटहरीले स्कुलले विद्यार्थीलाई लक्षित गरेर ‘स्कुल थिएटर’ सञ्चालनको आठौँ शृङ्खला चलाइसकेको छ । गत असार २ गते नेपाल नाट्य उत्सव काठमाडौँमा पनि सानदार सहभागिता जनाइसकेको छ ।
यो वर्ष भने कलालयलाइ धेरै खुसीको खबर छ । त्यो हो भारतीय राज्य पश्चिम बंगालको कलकत्ताको एक पुरानो र प्रतिष्ठित नाट्य संस्थाको नाटक मञ्चन गर्ने निम्तो । इटहरीको नाट्य संस्थालाई कलकत्ताको निम्तो आएको विषयमा कलालय अध्यक्ष सोनु जयन्तीलाई प्रतिक्रिया माग्दा उनी भन्छन्, ‘यो गर्वको कुरा हो ।’
कलालयको कलकत्ता निम्तो र यसका अन्य नाट्य गतिविधिमा आधारित भएर प्रदेशपोर्टल डटकमका लागी विराट अनुपमले अध्यक्ष सोनु जयन्तीसँग कुराकानी गरेका छन। कुराकानीको सारः
कलाकलयलाइ कलकत्ताको निम्तो कसरी सम्भव भयो?
यसको रोचक संयोग छ । केही महिना अगाडि इटहरीको युवा विकास केन्द्रको आयोजनामा एक कार्यक्रम भएको रैछ । गैरनाट्य कार्यक्रममा आउनु भएको कलकत्ताको प्रसिद्ध कृष्णनगर सिंचनकि सूभरा रोए पनि आउनु भएको रैछ । नाटकको मान्छेलाई नाटकको चासो हुने भइहाल्यो । उहाँले आयोजकसँग इटहरीको नाट्य गतिविधिको बारेमा सोध्नु भएछ । आयोजकले कलालय टिमसँग जोडिदिए । हामीले हाम्रो स्कुल थिएटरको आठौँ शृङ्खला सकेको कुरा गर्‍यौ । त्यो कुरामा उहाँ बढो खुसी हुनुभयो । खुसीको कारण कलकत्तामा उहाँहरू पनि हामीले जस्तै कैदीहरूलाई नाटक सिकाउनु हुँदोरहेछ ।
कलकत्तामा कहिले कुन नाटक मञ्चन हुन्छ र यसको तयारी कस्तो छ?
कलालयले उत्पादन र मञ्चन गरेको धेरै नाटकहरू छन् । हामीले कलकत्तामा प्रदर्शन गर्ने नाटक भने ‘ईश्वरलाई चिठी’ रहेको छ । यो नाटक पछिल्लो समयमा निकै लोकप्रिय भयो । इटहरी देखी काठमाडौँ सम्म लोकप्रिय रह्यो । निर्देशन प्रज्जल पराजुली देखी कलालयका यो नाटकमा अभिनय गर्ने सम्पूर्ण टिमसँग कुरा गर्दा यही राम्रो हुने भन्ने कुरा आयो ।
हाम्रो नाटक डिसेम्बर महिनामा गर्ने कुरा छ । दिन तोकिएको छैन । तयारी भने भएको छ । हामीले गत जुलाई २५ मा कलकत्ता गएर कृष्णनगर सिन्चनसँग कुराकानी गरेर आइसकेका छौँ । निर्देशन प्रज्वल पराजुली, म र कवि बद्री भिखारीले कुरा फाइनल र औपचारिक बनाएर आएका छौँ ।
कलालयको पहिलो विदेश यात्रामा कस्तो आशा गर्नु भएको छ?
कलालय समूहको यो पहिलो विदेश यात्रा भए पनि कलालय संस्थाकै रूपमा भने पहिलो हैन । सन २०१० मा भारतको चन्डिगढमा भएको सार्क उत्सवमा मैले कलाकलयको प्रतिनिधित्व गरेको थिए । यो पटक हामी समूहमै जाँदै छौँ । इटहरीमा नाटक गर्ने हाम्रा कलाकारले काठमाडौँमा पनि राम्रो गरे । नेपालका नाट्य हस्तीहरू सुनिल पोखरेल देखी नाट्यकर्म देखी प्राज्ञिक क्षेत्रका लिजेन्ट अभि सुबेदी सम्मले काठमाण्डौको कलालयको प्रदर्शनको प्रशंसा गर्नु भयो । अब, कलकत्तामा पनि राम्रो गर्ने आशा छ ।
कलालयको आफ्नो थिएटर हल छैन । लाइट सेट देखी थिएटर सेटमा पनि पूर्वाधारविना काम दुःखले जसोतसो काम गर्दै आउनु भएको छ । अब कलकत्ता जस्तो उत्कृष्ट थिएटर हल र प्रविधि भएको स्थानमा नाटक गर्न सकस हुँदैन?
सकस हुँदैन । सिकाइ हुन्छ । हामी हाम्रो कुरा प्रस्ट भन्न कन्जुस्याइ गर्दैनौँ । जस्तो, असारमा राष्ट्रिय नाट्य महोत्सवमा हामीले पहिलोपटक लाइटमा काम गरेको भनेर भन्यौँ । कलकत्तामा पनि यस्ता केही असहज भए हामी खुलेर कुरा गछौँ । मुख्य कुरा नाट्य चेत र कर्म हो । त्यो कुरामा हामी केन्द्रित छौँ । प्रविधिमा पछि परेका कुराहरू क्रमशः सिक्दै र अभ्यस्त हुँदै जानेछौँ ।
प्रदेश १ को नाटक छिमेकी भारतीय प्रदेशको राजधानीमा गर्दै हुनुहुन्छ । राज्यको पनि सहयोग छ कि?
विल्कुल छैन । हामीले राज्यसँग आर्थिक सहयोग मागेका छैनौँ । दिन्छु भनिएको पनि छैन । कलकत्तामा हामीले सहकार्य गर्न लागेको कृष्णनगर सिन्चनलाइ भने त्यहाँको राज्य सरकारले भत्ता देखी अनुदान दिँदो रहेछ । राज्यको प्रोत्साहनले धेरै नाटकमा काम भएको पाइयो । हाम्रोमा भने जरामा भन्दा पातमा पानी हाल्ने चलन छ । जस्तो नाटक उत्पादनमा लगानी गरिँदैन । पुरस्कारमा मात्रै ध्यान हुन्छ । यो राम्रो हैन ।
तपाँइहरु नाटकमा स्कुले विद्यार्थीहरूमा केन्द्रित हुनुहुन्छ । हाम्रो देशमा भने स्कुल सकेपछि मात्रै नाट्य कोर्स गर्ने वा नाटकमा आउने आम प्रचलन छ । किन तपाँइहरु स्कुलमा धेरै केन्द्रित हुनु भएको?
तपाँइले हाम्रो आठौँ संस्करणमा आएको स्कुल थिएटरको कुराले यस्तो भन्नु भएको होला । हो हामी स्कुलमा बढी केन्द्रित हुन्छौँ । नाटकले मान्छे बनाउँछ । मान्छेले पहिले मान्छे बन्ने हो । मान्छे बन्न सबैभन्दा सहज नाटक हो । कला, संस्कृति देखी व्यवहार सम्मका सबै कुरा नाटकमा मात्रै प्याकेजमा पाइन्छ । त्यही भएर मान्छे बन्ने प्रक्रिया स्कुले हुँदै सुरु हुनुपर्छ । स्कुले जीवनमा सिकेका कुराको जीवनमा दीर्घकालीन असर हुन्छ ।
हामीले स्कुलमा धेरै केन्द्रित भए पनि स्कुलमा मात्रै केन्द्रित छैनौँ । होम थिएटर भनेर हामीले गृहिणीहरूलाई पनि थिएटरमा ल्याउने कार्यक्रमहरू गरेका छौँ ।